सीके लालले भने–डाक्टर केसीको आन्दोलन गलत - Marganugami Daily
Marganugami Daily Bichar Breaking सीके लालले भने–डाक्टर केसीको आन्दोलन गलत
सीके लालले भने–डाक्टर केसीको आन्दोलन गलत
Marganugamidaily प्रकाशित समय 10:37:00 PM
काठमाडौं, २८ पुस । राजनीतिक टिप्पणीकार तथा विश्लेषक सीके लालले मौनता तोड्दै डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन बारे टिप्पणी गरेका छन् । कुराकानी गर्दै लालले यदि संविधानलाई मान्ने हो भने कानूनी दृष्टिकोणबाट केसीको आन्दोलन गलत रहेको बताएका छन् ।
त्यसै विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आई रहँदा सीके लालले समेत प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भने–नैतिक रुपमा आन्दोलन जति सुकै राम्रो भए पनि त्यसमा प्रश्न उठाउन मिल्छ । उनले संविधानसभालाई नै अवैधानिक घोषित गर्ने न्यायालयसँग किन यति अपेक्षा गरेको भन्ने समेत प्रश्न गरे ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधानसभा लाई नै अवैधानिक घोषित गर्ने ? अनि त्यस्तो अदालतबाट योभन्दा बढी अपेक्षा किन ?
जहाँसम्म अदालतको कुरा छ अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो त्यहि अदालत होइन जसले आदालत मार्फत ‘कू गरेर सरकार मात्र होइन, विधायिका मात्र होइन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधानसभालाई नै अवैधानिक घोषित गर्ने ? अनि त्यस्तो अदालतबाट योभन्दा बढी अपेक्षा किन ?
नेपाली समाज जुन कुहिएको आवस्थामा छ त्यो कुहीगन्ध निस्कने विभिन्न प्वालहरुमध्येको एउटा प्वाल गोविन्द केसीको आन्दोलन हो । यसले अंग्रेजी नाटकको एउटा संवाद याद दिलाउँछ ‘समथिङ इज रोटन ईन डेनमार्क भने जस्तै ‘समथिङ इज रोटन ईन नेपाल भन्नुको अर्थ नेपालमा केही न केही कुहिएको छ र त्यसको गन्ध यो सानो प्वालबाट निस्किएको छ ।
मलाई लाग्ने के हो भने, यदि समाजमा गति छैन भने त्यो समाज रुपान्तरणतर्फ जान सक्दैन । त्यसैले समाजको रुपान्तरणका लागि समाज गतिवान हुनुपर्छ । समाज गतिवान हुने भनेको यस्तै खाले सामाजिक संघर्षहरुको घर्षणबाट हो । हामी डराउनु पर्ने भनेको समाज कुहिन थाल्दा हो । तर समाजमा सामाजिक घर्षण भैरहेको छ भने हामी डराउनु पर्दैन । रातोपाटीबाट सभार